Tartan orod oo ka dhacay Borås/ Kretslopp – danwadaagforening.se
Home 2015 September 19 Tartan orod oo ka dhacay Borås/ Kretslopp
Maanta oo ay taariikhdu aheyd 19/9-2015 waxaa magaalada Borås ka dhacay tartan orod ah oo loo taqaano Kretslopp oo ay ka qeyb galeen dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Borås. Dadka orodka ku tartamay waxa ay isugu jireen jinsiyad walba oo leh da’ walba.
Haddaba dadka tartanka ka qeyb galay waxaa ka mid ahaa xubnaha jaaliyadda Danwadaag oo ah dad waaweyn iyo caruurba. Waxaana lagu tartamaayey 1 mil oo u dhiganta 10 km balse waxa ay aheyd qof walba iyo tabartiisa. Waxaa jiray dad iska soconayey si ay niyada ugu dhisaan dadka kale.
waxaa xusid mudan in dad badan oo ka qeyb galay orodkan ay ahaayeen dad waayeelo ah.